China Izibuko zelanga eziCwangcisiweyo zaMadoda nabafazi Ilanga zeglasi Umbala weMilror Lens 100% UV Ukuthintela ukuvelisa kunye neFektri | UBaolai
Izibuko zelanga eziCociweyo zaMadoda kunye naBasetyhini iiglasi zelanga Imibala yeeLilitha ze-Mirror 100% UV uvimba
3. KHUSELA AMEHLO AKHO NGESITayile Nokuba uqhuba, uhamba ngenyawo okanye uyasebenza, nokuba uyindoda okanye ungumfazi, zilungiselele yonke INGQALELO onokuyifumana kunye nomona wabo bonke abo bangakwaziyo ukufumanisa IMFIHLO YAKHO ENCINANE: Izibuko zakho zelanga zeKALIYADI.
4. ★ YONKE IMIHLA YOKUZONWABISA YONKE IMIHLA ▶ Ezo zibuko zelanga ziza neelensi ezilinganiswe kakuhle ezivavanywe ngokuhamba kwexesha. Ukwahlula-hlula kunciphisa ilitha elibonakaliswa zizipili, izinto ezikhazimlayo okanye ezigudisiweyo okanye naluphi na olunye uhlobo lwemitha yelanga. Uyakuva ukuba amehlo akho akhululeke ngokusisigxina kuba awusayi kuphinda urhale! Nokuba uqhuba uye emsebenzini, uhamba epakini okanye ubethwa lilanga elunxwemeni, uya KUDinwa NGOKUPHELELAYO ekupheleni kosuku kuba amehlo akho aXolile.
5. ★ BONA IHLABATHI KWIMIBALA YALO YENYANISO HD Iilensi ezibukekayo ze-HD zeiglasi zethu zelanga zibonelela ngombala WENYANISO ngenxa yokwaleka kombala ongathathi hlangothi kunye NOMBONO OCWELEYO ngokususa ukukhanya okukhanya kunye nokusasazeka. Ke ngoko uya kuba nakho ukonwabela iiglasi zelanga yonke imisebenzi yakho yangaphandle, ukuqhuba, ukuloba okanye nawuphina umdlalo wamanzi ngokunjalo. KHAWUTHELEKELE INDLELA OYA KUVAKALEKA NGAYO ngaphandle kokuba nexhala malunga nempilo yamehlo akho ngelixa ukwazi ukonwabela kunye nokuncoma umhlaba ngazo zonke iinkcukacha ezintle.
6. ★ HAMBELA SIMAHLA UZIHLALE SIMAHLA ▶ Siyazi ukuba izakhelo zingonwabi njani kwaye ziyichaphazela njani yonke into oyinxibileyo. Siyawukhathalela umbono wakho kwaye sifuna ukukunceda ugcine iiglasi zakho zelanga okoko uzifuna. Ke ngoko sithathe izinto ezilula zokukhanya kwesakhelo seglasi, iilensi ezityhafisiweyo ezingashukumiyo kwaye sikhathalele ukuze yonke imiphetho igudiswe kwaye ipolishwe ukuze UBE LIBA UKUBA ULALE UKUBA UNXIBE ELangeni. Ukunxiba izibuko zelanga akukaze kuphumle ngakumbi, kukhuseleke kwaye kukhululeke kunangoku!
Into leyo HAYI. 10161-6354
Ubungakanani 53x60x17 cm
Egqithileyo Izibuko zelanga zeAviator zaMadoda 100% UV woKhuselo lweGoggle Isakhelo seAlloy
Iindidi zeglasi zeAviator
Iiglasi zelanga zeAviator zaMadoda
Mens Iiglasi zelanga ezimnyama
Izibuko zelanga ezicwangcisiweyo zaMadoda
Iindondo zelanga ezingenabala
Isilungisi selanga samadoda
Izibuko zelanga ezinesitayile samadoda
Iindondo zelanga Mens